Health Archives - Shwengwe Games
January 16, 2020 Shwengwe Games 0
အမျိုးသား အားနည်းရောဂါခံစားနေရသူများအတွက် မြစ် ငါးကြင်းသားဓာတ်စာ။ အကုရခက်သော အမျိုးသားများတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသော ရောဂါနှစ်မျိုးရှိသည်။ထိုရောဂါနှစ်မျိုးမှာ ငယ်ရွယ်သူများတွင်သုက်လွှတ်မြန်သောရောဂါနှင့်အသက်ကြီးသူများတွင်ပန်းညိုးပန်းသေရောဂါများဖြစ် သည်။ ထိုရောဂါများအတွက် ဆေးကျမ်းများတွင် ပါဝင်သည့်ဆေးများမှာ ရှဥ့်မတက်ဥ၊ တောင်ကြာဥ၊ စာ သူငယ်ဦးနှောက်၊ ကျားအား၊ ဝံသည်းခြေ၊ ခန်းတောက်မြစ်၊ ကြာဝစၦံ စသည်များကို တစ်မယ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ အခြားဆေးအမယ်များနှင့် ပေါင်းစပ်၍ဖြစ်စေ ထောပတ်၊ […]
အသည်းရောဂါ ရှိမှန်း သိနိုင်မည့် အချက်များ
အသည်းရောဂါ ရှိမှန်း သိနိုင်မည့် အချက်များ အသည်းရောဂါအများစုသည်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွင်ချက်ချင်းမသိပဲအသည်း ထိခိုက်ပြီးအသည်းအတွင်းမှ Bilirubin ဟုခေါ်သောအသားဝါစေသည့်ဓာတ်များသွေးတွင်းသို့ရောက်လာပြီးမျက်လုံးဝါခြင်း၊အသားဝါခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာသည့်အချိန်တွင်မှအသည်းရောဂါဖြစ်မှန်းသိရှိရပါသည်။ထိုမျှသာမကမိမိတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်အသည်းရောင်အသားဝါ အမျိုးအစား၊အသည်းအမျိုးအစား အပေါ်မူတည်ပြီးလည်းရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်သောအချိန်မှာကွာခြားပါတယ်။ဥပမာအသည်းရောင်အသားဝါတွင်အဖြစ်များသောအသည်းရောင်အသားဝါရောဂါများမှာအသည်းရောင်အသားဝါ A, B , C ဟူ၍ ၃မျိုးရှိပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ A ပိုးသည်နာတာရှည် အသည်းရောင်အသားဝါခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲရုတ် တရက်အလျင်အမြန်အသည်းအားထိခိုက်စေပြီးအသည်းရောဂါလက္ခဏာများပြတတ်ပါသည်။ရုတ်တရက်ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊အန်ခြင်း၊အသားဝါခြင်း၊ဆီးဝါခြင်း၊ဖျားခြင်း၊ အစား အသောက်ပျက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သည့်အတွက်အသည်းရောင်အသားဝါ A […]
အသက်ရှူမဝ ဖြစ်စေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၁၀) ခု
January 15, 2020 Shwengwe Games 0
အသက်ရှူမဝ ဖြစ်စေရတဲ့ အကြောင်း ရင်း (၁၀) ခု ရေးသားသူ Yun Sandi Nan Monဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win အသက်ရှူလိုက်တိုင်းရှူလို့မဝဘူးလို့ခံစားရတယ်၊နှာခေါင်းပေါက်ပဲကျဉ်းနေသလိုလေအပြည့်မရသလို၊အောက်ဆီဂျင်မရသလိုခံစားရတာမျိုးဖြစ်ဖူးကြတယ်မလား။ဒီတော့အသက်ရှူရင်ငါးကြိမ်မှာ သုံးကြိမ်လောက်ကရှိုက်ရှူရတော့တယ်။ သူများမြင်ရင်တော့သက်ပြင်းချတယ်ပေါ့။အမှန်ကကိုယ့်မှာတစ် ယောက်တည်းအသက်ရှူမဝဖြစ်နေတာ။အဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲလေ့လာရအောင် ဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေစုဆောင်းထားပါတယ်။ အရင်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာက – ပန်းနာရင်ကျပ် ပန်းနာရင်ကျပ်ကြောင့်အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းကရုတ်တရက်ကျဉ်းပြီးရောင် ရမ်းလာပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်အသက်ရှူလိုက်ရင်ရှူရခက်မယ်၊ကျပ်မယ်၊ချွဲထမယ်၊တရွှီရွှီမြည်နေမယ်။ဒါ့ကြောင့် အသက်ရှူရပိုကောင်းအောင် […]
သတိထားသင့်သော သွေးလေးဖက်နာ‌ ရောဂါ အကြောင်း
January 14, 2020 Shwengwe Games 0
သတိထားသင့်သော သွေးလေးဖက်နာ‌ ရောဂါ အကြောင်း အခုပြောမယ့်လေးဖက်နာကတော့ ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးဖက်နာမဟုတ်ပါဘူး။သွေးကြောင့်ဖြစ်တာ၊ပိုးသတ်ဆေးတွေ စားလို့မပျောက်ပါဘူး။သွေးကိုပြန်ပြီးသန့်ပေးတဲ့ဆေးစားရပါမယ်။သွေးလေးဖက်နာဟာကြာရင်၊မကုသရင်အဆစ်အကောက်ကွေးသွားတက်ပါတယ်။ခန္တာကိုယ်ထဲမှာပြေင်ကရောဂါပိုးမွှားတွေ ဝင်လာရင်ခုခံဓာတ်ရှိပါတယ်။ဒီခုခံဓာတ်က တစ်ခါတလေမှာမျက်စိလည်ပြီးတော့၊ ပိုးကိုမတိုက်ဘဲကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပြန်တိုက်တာရှိတယ်။ အဲဒီအခါမှာထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကို RHEUMATOID FACTOR (RF) လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ကအရိုးအဆစ်တွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့အခါသွေးလေးဖက်နာဖြစ်ပွားရပါတယ်။အရွယ်မရွေး၊ ကျားမ မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသက်(၃၀)မှ (၅၀)ကြားအဖြစ်များပါတယ်။မိဘမျိုးရိုးထဲမှာဖြစ်ဖူးတဲ့လူရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါလိုပဲကံဆိုးတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။လူ ၁၀၀ မှာ ၁ ယောက် နှုန်းလောက် ဖြစ်ပွားပါတယ်။ […]
လေးဖက်နာသမားများအတွက်ဆေးစွမ်းကောင်း လေးဖက်နာဖြစ်ရင်အဓိကအချက်သုံးချက်ရှိပါတယ် နံပါတ် ၁ ပိုးလေးဖက်နာ (နောက်ဆက်တွဲ နှလုံးအဆို့ရှင် ပျက်စီးစေ တတ်ပါသည်) နံပါတ် ၂ သွေးလေးဖက်နာ (အဆစ်အမြစ်တွေကောက်ကွေးသွားပြီး မထနိုင်အောင်ဖြစ်တတ်ပါသည်) နံပါတ် ၃ အရေပြားလေးဖက်နာ (အရေပြားမှာအနာများဖြစ်ပြီး ကျောက်ကပ်တွေပျက်စီးစေတတ်သည်) မိမိတွေ့မြင်ဖူးသည့် လွယ်ကူသောလေးဖက်နာ နှင့်အရိုးအဆစ်ကိုက်သူတို့အတွက်လိမ်းဆေးနှင့်စားဆေး လိမ်းဆေး (၁) သံပုရာသီး(၅)လုံး […]
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေတာကြောင့် သတိထားပြီး စားသင့်တဲ့အစားအစာများ
January 13, 2020 Shwengwe Games 0
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေတာကြောင့် သတိထားပြီး စားသင့်တဲ့အစားအစာများ ကျောက်ကပ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေကိုချေဖျက်ပြီး ဆီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့၊ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အ ဆိပ်အတောက်တွေများတဲ့အစားအသောက်တွေကိုများများစားမိလိုက်ရင် ကျောက် ကပ်ကနေချေဖျက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ ကြာလာတဲ့အခါကျောက်ကပ်မှာကျောက်တည်တာ၊ကျောက်ကပ်ပျက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျောက် ကပ်ကိုထိခိုက်စေလို့တစ်ခါတည်းအများကြီးမစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေကတော့ ဒါတွေပါ။ ထောပတ်သီးနဲ့ငှက်ပျောသီး ထောပတ်သီးနဲ့ငှက်ပျောသီးမှာပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် တစ် ထိုင်တည်းအများကြီးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်လို့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်စားသင့်ပါတယ်။ အနီရောင်အသား အသားကနေပရိုတင်းဓာတ်ရတယ်ဆိုပေမယ့်အနီရောင်အသားကနေရတဲ့ animal proteins နဲ့ purines ဓာတ်တွေက […]
လေဖြတ်ခါနီးရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက်
January 12, 2020 Shwengwe Games 0
လေဖြတ်ခါနီးရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက် လူသားများရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနဲ့မသန်မစွမ်းဖြစ်ရခြင်းတွေမှာလေဖြတ်ရောဂါဟာအဓိကအကြောင်းအရင်း တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီလေဖြတ်တာကိုဆေးပညာအရတော့ Stroke လို့ခေါ်ပါတယ်။လေဖြတ်ခြင်းမှာအဓိကအားဖြင့် ၂မျိုးရှိပါတယ်။ထို ၂မျိုးကတော့ လူသားများရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနဲ့မသန်မစွမ်းဖြစ်ရခြင်းတွေမှာလေဖြတ်ရောဂါဟာအဓိကအကြောင်းအရင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ဒီလေဖြတ်တာကို ဆေးပညာအရတော့ Stroke လို့ခေါ်ပါတယ်။လေဖြတ်ခြင်းမှာအဓိကအားဖြင့် ၂မျိုးရှိပါတယ်။ထို၂မျိုးကတော့ ၂။ ဦးနှောက်အတွင်းသွေးကြောပေါက်လို့လေဖြတ်ခြင်း (ဦးနှောက်အတွင်းသွေးကြောလေးများသွေးပေါင်ချိန်တက်လို့ ပေါက်ထွက်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လေဖြတ်ခြင်း)ဆိုတဲ့ Hypertensive stroke ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ရုတ်တရက်လေဖြတ်ပြီးပြီးချင်း […]
ကျန်းမာရေးအတွက် စားသုံးဖို့ မသင့် တော်တဲ့ ငါးအမျိုးအစား ၅ မျိုး အချို့သော ငါးအမျိုးအစားတွေက ခန္ဓွာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ငါးစားသုံးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပြီးလူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရ ဓာတ် တွေကို ပေးစွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချို့သောငါးအမျိုးအစားတွေကတော့ခန္ဓွာကိုယ်အတွက် ကောင်း ကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကိုသာဖြစ်စေနိုင်တာ ကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်တော်တဲ့ငါးအမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ငါးကင်ဆိုင်တွေမှာအများဆုံး အသုံးပြုပြီးတလားဗီးယားလို့ လူသိများကြတဲ့ငါးဟာပရိုတိန်းပါဝင်မှုနည်းပါး သလို Omega3[…]
January 10, 2020 Shwengwe Games 0
နှာခေါင်း ပိတ်ခြင်းကို 15 မိနစ်တည်းနဲ့ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ အမြဲတမ်းနှာခေါင်းပိတ်နေတဲ့သူတွေကနေရထိုင်ရခက်လို့ နှာခေါင်းပိတ်တာကိုမြန်မြန်ပျောက်ချင်ကြပါတယ် ။ 6. မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကို နှိပ်နယ်ပေးပါ မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကိုညင်ညင်သာသာနှိပ်နယ်ပေးရင်ဦးခေါင်းခွံနဲ့ နှာ ခေါင်းပေါက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လေလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းတာကိုကာကွယ်ပြီးဖြစ်စေပါတယ်။ 5. နှာခေါင်းတစ်လျှောက် နှိပ်နယ်ပေးပါ နှာခေါင်းတစ်လျှောက်ကိုတစ်မိနစ် ၊နှစ်မိနစ်ကြာအောင်ညင်ညင်သာသာနှိပ်နယ်ပေးရင်နှာခေါင်းအတွင်းကလေလမ်းကြောင်းပွင့်သွားပြီးအသက်ရှူရတာ ကောင်းလာမှာပါ ။ 4. နှာခေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းကြားက […]
လူတိုင်း စိုးရိမ်သွား တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ များ(၂)
January 9, 2020 Shwengwe Games 0
လူတိုင်း စိုးရိမ်သွား တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ များ(၂) ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါလူတွေဟာကြားဖူးနားဝတွေစဉ်းစားပြီးလန့်လန့်သွားတတ်ကြပါတယ်။ကဲအရမ်းကြီးကြောက်စရာမလိုတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်နော်။ ၉။ မျက်ခွံလှုပ်ခြင်း မျက်ခွံတစ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေရင်ကျန်းမာရေးပြဿနာထက်လူနေမှုပုံစံကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်။တစ်နေ့လုံးကွန် ပျူတာတွေ၊ဖုန်းတွေကြည့်နေတဲ့အခါ မျက်လုံးအားစိုက်ရပါတယ်။မျက်လုံးကို အနားပေးပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်အလုပ်နားတဲ့အခါ စခရင်မ်‌တွေကြည့်စရာမလိုတဲ့ညနေပိုင်းအပန်းဖြေနည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုရွေးလုပ်ပါ။ဒါနဲ့မှမပျောက်ရင်တော့ရှားရှားပါးပါးအာရုံကြောပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၁ဝ။ ရာသီကျော်ခြင်း ရာသီကျော်တိုင်းကိုယ်ဝန်ရှိပါပြီမဟုတ်သေးပါဘူး။အ ကြောင်းရင်းအများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ဟော်မုန်းတွေဟာကိုယ်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုအရမ်းတုန့်ပြန်မှုအားကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ၊ရုတ်တရက်ဝိတ်ကျသွားတဲ့အခါဓမ္မတာမမှန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရာသီတစ်လ‌လောက်ကျော်သွားတာကိစ္စမရှိပါဘူး။၃လကျော်လာရင်တော့သတိထားပါတော့။ကိုယ်ဝန်လည်း မရှိဘူးဆိုရင်ဆေးတွေ၊ဟော်မုန်းပြ ဿနာတွေကိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေး နွေးပါ။ ၁၁။ အဆစ်ထဲမှ တဂျစ်ဂျစ်မြည်ခြင်း အဆစ်တစ်ဂျစ်ဂျစ်မြည်တာဟာအဆစ်ရောင်တာကြောင့် […]